Madagasikara: Fandrahonana vaovao mahazo ny Fiangonana Protestanta sy ny Fahalalahana miteny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Janoary 2010 22:32 GMT
Mbola voamariky ny fihetsiketseham-panoherana ihany ny fanombohan'ny taona teto Madagasikara ary dia mbola voaenjika sy sotasotaina koa ireo izay heverina ho akaiky ny fitondrana teo aloha nandritra ny nitondran'i Marc Ravalomanana, ka ao anatin'izany ny mpanao gazety maro sy ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara.
Nosamborina ny mpanao gazety roa avy amin'ny Radio Fahazavana, Lôlô Ratsimba sy Didier Ravoahangiarison. Fampielezam-peo akaiky ny FJKM, Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara, izay manakaiky kokoa ny Presbyteriana ny Radio Fahazavana. Filoha Lefitry ny FJKM ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, Fifanakaikezana izay nampanahy ny sasany sy notsikerain'ny mpanohitra an-d Ravalomanana ho mandika ny fisarahan'ny fiangonana sy ny fanjakana izany.
Nahazo fahafahana vonjimaika kosa ny mpanao gazety hafa, Jaona Raoly. Voampanga ho mpiray tsikombakomba tamin'ny fiokoana miaramila nandamoka nandritra ny maraimben'ny 29 desambra kosa i Lôlô Ratsimba sy i Didier Ravoahangiarison. Mitantara ny fisamborana ny zorom-baovao antseraseran'ny Moov :
Nikarakara fotoam-pivavahana izay maro mpanatrika ny fiangonana omaly. Sary avy amin'ny vohikala pro-Ravalomanana Collectif GTT.
Misy indray ny mieritreritra raha voasazy noho ny nifanakaikezany tamin'ny filoha teo aloha Ravalomanana ny fiangonana. Manana izany famakafakana izany ny Tananews:
Tamin'iny 2009 iny moa dia niezaka ny hanelanelana an-d Ravalomanana sy Rajoelina ny Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara. Maro ny fanelanelanana nahomby nataon'ny Fiombonana hatramin'ny 1980 noho ny nananany fahefana maoraly sy ara-pivavahana. Tamin'ity indray mitoraka ity kosa, na dia maro aza ny tapatapak'ahitra nifanaovana, dia lasa endrik'i Madagasikara voazarazara ity Fiombonana ity, nalemy sy nitongilana (Jereo ny resaky ny Mgr Razanakolona tao amin'ny Radio Vaticana).